mianatra - ALinks
Lahatsoratra momba ny fandinihana
Ahoana ny fianarana any amin'ny oniversite any Norvezy?
Enga anie 12, 2022 Demi Norvezy, fianarana
Ny dingana fidirana sy fangatahana any Norvezy ho an'ny fampianarana ambony dia amin'ny alàlan'ny andrim-panjakana tsirairay na amin'ny alàlan'ny NUCAS. Ny dingana ho an'ny andrim-panjakana dia manana fepetra sy fe-potoana samihafa. Alohan'ny hanombohana ny dingana dia tsy maintsy mahazo ny fampahalalana ilaina rehetra ianao. Aoka ho izany
Lisitry ny oniversite any Arabia Saodita
Janoary 18, 2022 Shubham Sharma Arabia Saodita, fianarana
Ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia iray amin'ireo firenena haingana indrindra amin'ny resaka fanabeazana kalitao any Atsinanana. Saudi Arabia izao dia manana andrim-panjakan'ny kilasy manerantany. Ny firenena dia manome fampianarana an'izao tontolo izao amin'ny saika fampianarana rehetra. Saodiana
Inona avy ireo oniversite tsara indrindra any Pakistan?
Janoary 17, 2022 Demi Pakistan, fianarana
Ny fampianarana ambony any Pakistan dia niitatra tamin'ny 1947, taorian'ny fahaleovantenan'ny firenena. Ny vaomiera ambony momba ny fampianarana (HEC) dia miahy ny rafitry ny fampianarana. Ny HEC dia manara-maso ny famatsiam-bola, ny vokatry ny fikarohana ary ny kalitaon'ny fampianarana. Manaiky oniversite 174 ao amin'ny firenena ny komisiona. Ny tenim-pirenena
Janoary 17, 2022 Demi Kanada, fianarana, visa
Ahoana ny fomba fangatahana any amin'ny oniversite any Canada?
Janoary 14, 2022 Demi Kanada, fianarana
Ny fianarana any Canada dia toerana tsara indrindra ho an'ny mpianatra maniry hianatra any ivelany. Ny oniversite, ny oniversite, ny sekoly teknika, ny zavakanto ary ny andrim-panjakana siantifika dia manome safidy fianarana malalaka. Mba hampiharana ny iray amin'ireo renirano ireo dia mila mahafantatra ny fizotran'ny fomba
Manao ahoana ny rafi-panabeazana any Torkia?
Novambra 22, 2021 Shubham Sharma am-pianarana, fianarana, vorontsiloza
Tiorka dia firenena iray any amin'ny kaontinanta Aziatika sy Eoropeana. Ny ankamaroan'ny firenena dia any Azia Andrefana ao amin'ny saikinosy Anatolian. Ny fari-piainana any Torkia dia tena tsara, ka raha mikasa
Novambra 21, 2021 Shubham Sharma fianarana, vorontsiloza
Ny anjerimanontolo Tiorka dia nomena laharana araka ny toerana misy azy ao amin'ny laharana Best Global Universities amin'ny ankapobeny. Ny sekoly dia nodinihina tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo sy ny naotin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina akademika any amin'ny faritra sy ny manodidina